I-Lorcaserin powder: Zonke izinto malunga nokulahlekelwa kweziyobisi ezinamafutha | I-powder powder
/Blog/Lorcaserin/I-Lorcaserin powder: Zonke izinto malunga nokulahleka kweziyobisi
ezaposwa ngomhla 12 / 18 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Lorcaserin. Ibe 1 Comment.
1.Yintoni I-Lorcaserin? 2.Iliphi i-Lorcaserin ipowder eluhlaza?
3.Lorcaserin generic negama legama 4.ow iLorcaserin / iBelviq isebenza njani?
5.Kusebenza njani iLarkcaserin / iBelviq? 6.Ingubani i-lorcaserin?
I-7.Inqanaba lomdala lomntu we-drug Lorcaserin 8.Iyiphi ingcaciso endifanele ndiyazi ngaphambi kokuba ndiyithathe i-lorcaserin?
9.Ndifanele ndiyiqaphele ngelixa ndisebenzisa i-lorcaserin? 10.Ndimele ndiyazi ntoni emva kokuba ndiyithathe i-lorcaserin?
I-11.Lorcaserin Ngamanye angamelana namanye amayeza: 12.Kwenzeka ntoni xa ndilahlekelwa umthamo weLorcaserin?
13.Kwenzeka ntoni xa ndidlula ngaphezulu (Lorcaserin)? I-14.Iziphumo zecommon ye-lorcaserin ziquka: (inxenye)
I-Lorcaserin (i-Belviq) i-powder video
I-Lorcaserin (i-Belviq) i-powd
igama: Lorcaserin powder
I-molecular Formula: C11H14ClN
Isisindo somzimba: 195.692
Kutheni le ngcaciso imiselwe?Ukulahleka kwamafutha Lorcaserin yayivelisa. Lorcaserin, njengaye Orlistat, ufumane ukuvunyelwa kwe-FDA kwi-1999, isetyenziselwe ukunceda abantu abadala okanye abanomzimba ogqithiseleyo kunye neengxaki zonyango ezinxulumene nesisindo. yehla emzimbeni kwaye uhlale ungabuyi kubuyisa ubunzima. I-Lorcaserin kwinqanaba lemithi ebizwa ngokuthi i-serotonin receptor agonists.I-cascaserin kufuneka isetyenziswe kunye nciphisa i-calorie yokutya kunye nesicwangciso sokusebenzisa.
2.Iliphi i-Lorcaserin ipowder eluhlaza?
Lorcaserin ekrwada, aphila ngayo Lorcaserin isiyobisi, luhlobo lwe White ukuya off-powder emhlophe, abaninzi iimveliso ukulahleka kwamafutha umthengisi ngokuqhelekileyo kuthenga ntumbuluko eliphezulu Lorcaserin ngumgubo ekrwada; ngoko kuwenza ube ugqibile omnye, iinkcukacha Lorcaserin olungumgubo nje ngezantsi:
I-Formula ye-Molecular: C11H14ClN
I-Melt Point: 212 ° C
3.Lorcaserin generic negama legama
Isilwanyana sitholakala ngaphantsi kwegama eliqhelekileyo elithi Lorcaserin kunye negama legama leBelviq.
I-Lorcaserin iphuhliswa yinkampani yezobisi i-Arena Pharmaceuticals.
I-Lorcaserin yenziwe yi-Arena Pharmaceuticals kwaye ithengiswa yi-Eisai Pharmaceuticals.
4.ow iLorcaserin / iBelviq isebenza njani?
Isilwanyana sisebenza ngokulawula ukutya - ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ye-serotonin, i-neurotransmitter evuselela iimvakalelo zokuxhamla kunye nokwaneliseka. Ukungena kokutya kulawulwa yiziko elixhasayo, elisekliniki ye-hypothalamus kunye nendawo elambileyo ekhoyo kwi hypothalamus yangaphambili. Iziphumo ezivela kumaziko aphezulu kunye namaphepheni omzimba ziguqula i-nucleus, apho kukho iintlobo ezimbini ze-neurons ezilawula ukutya okukhoyo. Okokuqala, iqela lokuvuselela ukutya lokuvelisa iprotheni ehlobene ne-agouti kunye neuropeptide Y; kwaye okwesibini, iqela lokutya lokuvimbela ukutya eliqukethe i-cocaine kunye ne-amphetamine lilawulwa ngokubhaliweyo (inqwelana) kunye ne-pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. I-POMC iqulethe i-5-HT i-2C receptors, xa isebenze ikhupha i-hormone ye-alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH) .Iimpawu ze-inhibitory ne-stimulatory neurons zenza iiprojekitiular paraxistular nucleus kwi-hypothalamus. I-nucleus iqukethe i-melanocyte i-4 receptors (MC4R) evimbela ukutya i-lorcaserin iyenziwa njenge-5-HT 2C agonist kwi-POMC neurons, leyo eyenza ikhululwe i-alfa MSH. I-alfa eqhubekayo i-MSH isebenza kwi-MC4R kwi-nucleus ephambili kwinqanaba le-hypothalamus, ekhokelela ekunciphiseni ukutya. Kwizidakamizwa ze-supratherapeutic, i-lorcaserin yenza kwakhona kwi-5-HT 2B kunye ne-5-HT 2A receptors.
I-Lorcaserin ixakeka ngokukhawuleza kwindlela yokuxhamla esiswini kwaye ilibaziseka ngokutya okunamafutha. Incopho plasma xi kolu 1.5-2 h, kunye nesiqingatha-ubomi 11h.  Oku ngokulinganayo kuthunyelwa kwinkqubo kulwelo lwe- cerebrospinal kunye central luvo. I-Lorcaserin yi-70% yeprojekthi yeprojekthi ye-plasma eboshwe kunye ne-metabolized in the fover, kunye ne-metabolite enkulu i-lorcaserin sulfamate, kwaye i-excretion yayo ingundoqo kumchamo (i-92%) kunye ne-excretion encinci ebusweni.
5.Kusebenza njani iLarkcaserin / iBelviq?
I-FDV-avunyelwe yi-Belviq ukuhla ukusinda phakathi kwabantu abagqithisileyo nabakhuluphele. Uvumelekile ukuzama i-lorcaserin ukuba:
Unayo i-BMI ngaphezu kwe30
I-BMI yakho yi-27 okanye ngaphezulu, kodwa unomlingo ubuncinane nesifo esisinye nesinye
Uya kugqiba inkqubo yokulahlekelwa kwesisindo sokugulisa
Ukugcina ubunzima bokulahleka kwexesha elide, kuya kufuneka wenze utshintsho olusigxina ekudleni kwakho kunye nemikhuba yokuzilolonga. Njengawo onke amayeza enkunkuma, lorcaserin powder Kunconywa kuphela phantsi kweliso logqirha lwakho logqirha.
I-7.Inqanaba lomdala lomntu we-drug Lorcaserin
I-dose ephakanyisiweyo ye-lorcaserin yokulawula ubunzima i-10 mg kabini ngosuku.
8.Iyiphi ingcaciso endifanele ndiyazi ngaphambi kokuba ndiyithathe i-lorcaserin?
Akufanele usebenzise i-lorcaserin ukuba uyayilungisa.
Ungasebenzisi i-lorcaserin ukuba ukhulelwe. Ukunciphisa ukulahleka ngexesha lokukhulelwa kungalimaza umntwana ongakazalwa, nokuba ukhuluphele. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhulelwe ngexesha lonyango.
Kungcono ungathathi i-lorcaserin ukuba unesifo sikashukela, ukukhubazeka kwentliziyo, isifo senhliziyo, isifo se-sickle cell, i-leukemia okanye i-myeloma, isifo okanye isifo sesibindi, okanye ukukhubazeka komzimba (njenge-Peyronie's disease)
Ayaziwa ukuba i-lorcaserin idlula ubisi lwebele okanye ukuba inokulimaza umntwana oswele. Akufanele ukondliwe ngenkathi usebenzisa le mayeza.
Lorcaserin ayivunyelwe ukusetyenziswa ngumntu omncinane kuneminyaka eyi-18 ubudala.
9.Ndifanele ndiyiqaphele ngelixa ndisebenzisa i-lorcaserin?
Ungaqhubi, sebenzisa umatshini, okanye wenze nantoni na efuna ukulinda kwengqondo de uze wazi ukuba eli liyeza lithinta njani.
Gwema ukuthatha ukukhwehlela kunye nokubandayo okanye ukunyanga kwamayeza xa usebenzisa i-lorcaserin.
Eli liyeza lingachaphazela amazinga eshukela egazi. Ukuba unesifo sikashukela, tshekisha ugqirha wakho okanye uncedo lwezempilo ngaphambi kokuba utshintshe ukutya kwakho okanye umthamo weyeza lakho leyeza.
Musa ukuthatha nayiphi na imithi okanye i-product-loss-weight-loss products product without advice.
Izigulane kunye neentsapho zabo kufuneka zijonge ukudandatheka okanye ukuzibulala. Qaphela kwakhona ukuba utshintsho olukhawuleza kwiimvakalelo ezifana nokuziva uxhalabile, ukukhathazeka, ukukhathazeka, ukucaphukisa, ukuchasana, ukugwenxa, ukunyamezela, ukunyamezela, ukunyamekela, nokungahlali, okanye ukungahlali. Ukuba oko kwenzeka, ingakumbi ekuqaleni kwonyango okanye emva kokutshintsha kwidaysi, biza unonophelo lwenkonzo yakho yezempilo.
Xhagamshelana nogqirha wakho okanye umqeqeshi wezempilo unyango ngokukhawuleza ukuba ungumntu onokumiswa okwexesha elide kuneeyure ze-4 okanye ukuba ulungiso luba buhlungu. Oku kungaba ngumqondiso weengxaki ezinzulu kwaye kufuneka uphathwe ngokukhawuleza ukukhusela umonakalo ongunaphakade.
10.Ndimele ndiyazi ntoni emva kokuba ndiyithathe i-lorcaserin?
Gcina i-lorcaserin kwiqondo lokushisa phakathi kwe-59 ° F ukuya kwi-86 ° F (15 ° C ukuya kwi-30 ° C).
Gcina oku kunye nawo onke amayeza angaphaya kokufikelela kwabantwana.
Lorcaserin powder yinto elawulwayo (CIV). Gcina i-lorcaserin kwindawo ephephile ukukhusela kwiba.
Ungalokothi unike amayeza akho kunoma ubani. Ukuthengisa okanye ukunika le mayeza akuchasene nomthetho.
I-11.Lorcaserin Ngamanye angamelana namanye amayeza:
amayeza athile okudakumba, ukuxhalaba okanye ukuphazamiseka kwengqondo
amayeza athile e-erectile dysfunction
Amachiza athile e-migraine entloko njenge-almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
nezinye iimveliso zokulahlekelwa kwesisindo
ISt John's Wort
amayeza avuselela ingxaki, ukulahleka kwesisindo, okanye ukuhlala ephapheme
12.Kwenzeka ntoni xa ndilahlekelwa umthamo weLorcaserin?
Thatha umthamo olahlekileyo ngokukhawuleza ukuba ukhumbule. Dweba idiza ephosakeleyo ukuba phantse ixesha lakho elilodwa elihleliweyo. Musa ukuthatha unyango olongezelelweyo ukwenza i dose ephosakeleyo.
13.Kwenzeka ntoni xa ndidlula ngaphezulu (Lorcaserin)?
Funa uncedo lwezempilo oluphuthumayo okanye ubiza umnxeba woNcedo lweTyhefu kwi-1-800-222-1222.
Iimpawu ezigqithiseleyo zingabandakanya iintlobo ezinzima zezinye iziphumo ezibekwe kulolu khokelo lonyango.
I-14.Iziphumo zecommon ye-lorcaserin ziquka: (inxenye)
Ishukela eliphantsi kwegazi
Imiphumo emibi ye lorcaserin azinqabile. Ukuba unayo nayiphi na impawu elapha ngasentla, okanye ezinye iimpawu ozikholelwayo zihlobene nokuthatha i-lorcaserin, qha ga mshelana nodokotela wakho wokulahleka kwesisindo ngokukhawuleza.
nedelice12 / 19 / 2017 kwi-4: 37 ntambama
Ewe, ndikuqonda. Kukho into ecinga ukuba yinto ebalaseleyo, ndiyayixhasa.
Viagra? Yonke into malunga noTywala yaseFlibanserin	I-Testosterone i-Sustanon 250 ipowder yokwakha umzimba: iimfihlo ze-18 kufuneka wazi !!!